ရုပ်ရှင်သစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ယနေ့ခေတ်အခြေအနေကို မေးခွန်းထုတ်ထားကြောင်း တွမ်ဟန့်စ်ဆ?? - Yangon Media Group
ရုပ်ရှင်သစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ယနေ့ခေတ်အခြေအနေကို မေးခွန်းထုတ်ထားကြောင်း တွမ်ဟန့်စ်ဆ??
ဝါရှင်တန် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ၊ ဒါရိုက်တာကြီး စတီဗင် စပီးဘတ်၏ “The Post” ရုပ်ရှင်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းကို ဖော်ကျူးရိုက်ကူး ထားရုံမျှမက ယနေ့ခေတ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေကိုမေးခွန်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်စ်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်ညတွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲတွင် မင်းသားကြီး ဟန့်စ်က “ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်း အရမ်းစိတ်အားတက်ကြွစေ မယ့် ရုပ်ရှင်တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်” ဟု သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
၄င်းကဆက်ပြီး “လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ တန်းတူုညီမျှမှုတို့ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲရဲ့ အမွေအနှစ်အကြောင်းနဲ့ နှစ် ၄၀ သက်တမ်းရှိခဲ့တဲ့ ပေါ်လစီကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘယ်လို ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်စ်သည် ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာမှ အယ်ဒီတာ ဘန် ဘရတ်လီအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မင်းသမီးကြီး မယ်ရယ်စတွိက ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာ ထုတ်လုပ်သူ ကတ်သရင်း ဂရေဟမ်အဖြစ် ပါဝင်ထားသည်။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကို အမေရိကန်အစိုးရက အထင်အမြင်လွဲမှားစေရန် ပုံဖော်နေသည်ဟု ဆိုသော ပေါက်ကြားထားသည့် ပင်တဂွန်စာရွက်စာတန်းများကို ဖြန့်ချိရန် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် သတင်းစာများအကြား အကျပ်ရိုက်ခဲ့ပုံကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ဒါရိုက်တာကြီး စပီးဘတ်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တို့၏ အခြေအနေများသည် ဆင်တူသည့်အတွက် တစ်နှစ်အတွင်း ထိုရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူး ပြသရန် အလျင်အမြန် စီစဉ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီနှင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မီဂန်မာကယ်တို့ မေ ၁၉ ရက်တွင် လက်ထပ်မည်
အသင်းဟောင်း ဘာစီလိုနာသို့ နေမာ လာရောက် လည်ပတ်
ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ဘေးလ်အား ဆိုလာရီ ချီးကျူး